Bleak - inhlanzi cishe akekho sikubheka ngokungathi sína. Konke lokhu kuchazwe yokuthi it has a usayizi elincane futhi pecks ngokuphelele zonke izinhlobo ukudla okuhlukahlukene. ukudoba Afunwayo lifiphele kungabangela cishe behleka abadobi, kodwa umuntu onolwazi ungakwazi ukubamba amakhilogremu abaningi ungemuhle hhayi ukubamba noyedwa "Karpol" kwelinye kweseshini. Izinga langempela ukudoba abathanda lifiphele - 6 izinhlanzi ngomzuzu. Bleak - imfundo inhlanzi, eqoqwe endaweni eyodwa, futhi ukukhipha yonke yonke umhlambi cishe kungenakwenzeka. Kule ndaba, ungakwazi ukubamba ezinye kakhulu impela, emi endaweni eyodwa. Ukuze wenze lokhu, ubambe ukudoba isu elikhethekile futhi gear kwesokudla.
Ukudoba induku lifiphele kungenzeka kusuka ngamamitha 1 kuya 6 ubude. Konke kuncike ukuziphatha izinhlanzi. Uma iphakethe enqwabelene eduze nogu futhi izinto eziningi ezinkulu, bese bebanjwa ku izinduku emifushane (kufika ku 4 m), futhi uma CANT lifiphele iyiswe phansi, induku ubude obuphakathi edingekayo (4 kuya ku-6 metres). Okunjalo iqopha ukudoba futhi iza uthando, ngoba ufuna ukubamba kakhulu, futhi uma bonke kuvela, ke isibili ezithakazelisayo futhi kumnandi! Lokhu ukudoba ngesivinini akunakwenzeka ukuba uthole lolo 7 m eside, kodwa yimuphi umthetho zikhona ezehlukile. Ukudoba ngenduku iDemo kusivumela ukuthuthukisa isivinini crazy: izinhlanzi ngehora ezingaphezu kuka-300. Nokho, esimweni sezulu esibi lifiphele uya phansi, ngakho kuzodingeka induku eside. Catch umdobi isilinganiso can amahora ama-4 ngaphandle ubuhlungu lubonakale ezandleni zakhe. Kunzima kakhulu kukhulunywa ngo induku enjalo, futhi uma bite lifiphele asebenzayo, jika kuyoba kakhulu. Ukuze abambe ikhoyili le izinhlanzi akudingekile ngokuphelele, emaphethelweni "ukleechnoy" Ukudoba izinduku isixhumi etholakalayo lapho line ukudoba unamathele. Basuke edayiswa cishe njalo esitolo nokudoba kukhona amapeni nje.
Yamabhola antantayo futhi sinkers kudingeka izinto ezimbalwa kakhulu. Bleak - inhlanzi kuyinto buthaka kakhulu, izesekeli nzima ngakho yalutho. yamabhola antantayo Uthi lokuphotha emise asetshenziselwa isimo sezulu sisihle, unyembezi isidingo e kunomoya. Isisindo eliphezulu lolo iflothi Usayizi medium - 0.6-0.8, Georgia hung at ibanga 20-30 cm kusuka iflothi.
Lesko futhi ngezintambo zingaqiniseka ngokuphelele yimuphi umbala. Line ububanzi of mayelana 0.12 mm. Kusobala ukuthi ikhefu lifiphele ngeke, futhi ngangesaba izingwegwe akufanele, ngoba lokhu ukudoba kwenzeka ngakwesokudla ogwini. Uhola eyenziwe ukudoba umugqa ububanzi 0.08-0.1 mm, has a ubude 8-10 cm.
Izingwegwe isidingo lifiphele №№ 18-22, eyenziwe wire elincanyana kokuba tsereve eside. I elula kunazo hook - 20 udaba th. Ukuze luhambe ngokushesha uhlelo lokudoba nesilevu kungenziwa sicindezelwe phezu hook ne impintshisi, bese ususa izinhlanzi hook ngeke kube nobunzima. Nokho, kulesi simo, kukhona awokuthi ukuthathaumhlala. Sikhethe hhayi ekubambeni izinkinga kufanele izindawo - yonke indawo ezimpilweni lifiphele. Fish ukhetha engaqinile kanye namanzi ahlanzekile ngesikhathi nenqubo inikezwe okuhambelana lenqwaba kwamadamu okugcina amanzi.
Nokufaka futhi imishini ukudoba
I ozithandayo kakhulu aphathe lifiphele - izibungu futhi bloodworms. Ngaphezu kwalokhu, kukhona ezihlukahlukene ukudla okuhlukahlukene, okuyinto ukhetha izinhlanzi lifiphele. Isithombe sikhombisa indlela ukugqoka izimpethu ku hook.
lifiphele ukudoba amasu silula. Sidinga ukuzama aphonse endaweni efanayo futhi njalo aphonse izingcezu ezincane isinkwa soma ukuthi eside ukugcina inombolo enkulu zezinhlanzi endaweni oyifunayo. Ngikufisela inhlahla!
Ukudoba ama-Krasnodar esifundeni - iyipharadesi kubathandi
Nenadoedlivy crab isaladi
Ukukhanyiselwa ifilosofi izici zako ezisemqoka
China lolwandle resort: ukubuyekezwa, izinga lokushisa kolwandle